China FD pịa ụkwụ 3027177 ụlọ ọrụ na ndị na -ebubata ya Na mbụ
Ụkwụ onye nrụpụta Yamato FD nwere ike ịsị na ọ bụ ụkwụ nrụrụ aka kacha sie ike na ụlọ ọrụ igwe akwa. ọkpụrụkpụ nke akwa, enwere ike ikewapụta igwe nrụnye n'ime nkọwa atọ maka ịkwa akwa ihe dị mkpa, ihe ndị nwere oke na ihe siri ike; dị ka ụdị ịcha akwa, enwere ike kewaa ya n'ụkwụ onye na-ebuputa ihe n'otu. Ọphu ọ dụkwa iphe; dị ka obosara nke onye na -egbutusị ya, enwere ike kewaa ya n'obo ụkwụ mma mma na wara wara mma; na -atụle ihe dị iche na mbadamba opupu ihe mgbapụ ụkwụ, enwere ike ịhazi ma jikọta ọtụtụ igwe nrịba dị iche iche.
Isi ihe nke ọzọ bụ ịdịte aka nke igwe npịpị, nke kacha egosipụta na isi atọ ndị a.
Mbụ, ntụtụ njikọ na oghere ga -adakọrịrị.Ọ dị mkpa ka ntụtụ na oghere dị nfe dị elu ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ụda na -adịghị ahụkebe na Line ga -agbagọ ga -apụta mgbe ejiri ụkwụ pịa ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ.
Nke abụọ bụ ihe eji eme ụkwụ.Enweghị ike imenyụ efere mmiri mgbapụta ụkwụ dị larịị, ma nwee ike ịdabere naanị n'ịdị ike nke ihe ahụ n'onwe ya iji hụ na ọ na -eguzogide ma na -agbanwe. Ugbu a anyị na -azụta akụkụ site na Japan na Taiwan.
Ihe nke atọ bụ ihe onye na -egbutu osisi.Dịkwa ka ihe nrịba ama nke ihe nrịba ama nke ụkwụ, ogologo oge nke onye na -egbu ihe na -adaberekwa na njiri mara nke ihe ahụ n'onwe ya na ọgwụgwọ elu. Ugbu a anyị na -eji agụba emere na Japan na Taiwan. Iji hụ na ịdịte aka nke onye nbipute m ruru steeti kachasị mma. Nke ikpeazu bụ mkpọtụ nke igwe nrụnye. Ndị ọrụ mgbakọ anyị nwere ahụmịhe mgbakọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 na ụlọ ọrụ YAMATO. Usoro mgbakọ na -eji ọtụtụ ihe eji eme ihe. Tụkwasị na nke a, anyị emezila ngwa ngwa igwe nrụnye ma melite nsogbu nke ndị ahịa anyị. Ka ọ dị ugbu a, ịdị mma nke igwe nbipute anyị dị mma karịa nke Japan na Taiwan, ndị na-emepụta igwe ịkwa akwa dị elu na China hụrụ ya n'anya nke ukwuu.
Nke gara aga: FD Mmanụ mgbapụta 3020480
Osote: Looper, efere Stich na nkịta nri
Skwa Akwa Akụkụ Pịa Ụkwụ